Madaxwayne Geelle oo markii saddexaad hogaaminaya Jabuuti; warbixin ku saabsan doorashooyinka iyo taariikhda siyaasiga ah ee Jabuuti. – Radio Daljir
Abriil 10, 2011 12:00 b 0
Jabuuti, April 10 – Madaxwaynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay (Sabti) markii saddexaad si wayn ugu guulaystay doorashada madaxwaynenimo ee dalkiisa, isaga oo helay tiro ka badan 80% tirade horudhaca ah.
Inkasta oo uu guddiga doorashooyinka qaran ee Jabuuti ay sheegeen in doorashadu u dhacday si daacad ah, haddana waxa natiijada doorashada diiday Maxamed Warsame Raage oo ahaa musharax madax-bannaan iyo kan kaliya ee la tartamay madaxwayne Geelle. Mudane Warsame ayaa go?aankiisa ku sababeeyay in la isdaba mariyay tirinta cododka, dhammaan kooxdiisana ay ciidamada ammaanka oo qoryo ku hubaysan ka soo saareen goobihii cod-tirinta.
Si kastaba ha ahaatee waxa doorashadan horay u qaadacay dhammaan axsaabta mucaaradka ee dalka Jabuuti.
Warbixin dheer oo ka hadlay duruufaha doorashadan iyo taariikhda kooban ee Jamhuuriyadda Jabuuti waxa inoo soo diyaariyay wariye Cabdirisaaq Xasan Cabdi ?Jubba?